Kedu ọrụ SEO nwere ike imeziwanye ikike ngalaba m?
E nwere otu ajụjụ nkịtị na ụwa dijitalụ - "Olee otú aha ngalaba nwere ike isi metụta ebe nrụọrụ weebụ SEO?" Ụfọdụ ndị na-ekwenye na ọ dịghị njikọ dị n'etiti akụkụ ndị a niile. Ndị ọzọ na-eche na ọ bara uru itinye akwụkwọ ọchụchọ na ngalaba aha iji meziwanye ọnọdụ ebe nrụọrụ weebụ. N'isiokwu a, m ga-anwa igbochi echiche niile na-ezighị ezi ma nye gị azịza kwesịrị ekwesị maka ajụjụ otu njedebe ọchụchọ kachasị na ngalaba aha.
Aha njirimara mkpirikpi nkenke
Ka anyi site na ala nke echiche a. Aha aha bụ aha nke ika gị dị ka ebe nrụọrụ weebụ dị mkpirikpi - opi grain bin monitoring. Ọ na-eme ka ndị ọrụ mara ebe dị iche iche na Intaneti ebe ị wuru isi iyi weebụ gị. A na-eji ngalaba aha akọwapụta adreesị IP nke ebe nrụọrụ weebụ. Dị ka ihe atụ, semalt. com bụ ngalaba aha nke anyị dijitalụ ụlọ ọrụ, mgbe www. semalt. com na-eje ozi dị ka subdomain.
Ngalaba dị elu
Ọrụ ọkachamara SEO na-enye ndị ahịa ha naanị ngalaba dị elu dịka ha weere dị ka ihe ka mma. Ị nwetụla mgbe ị nọ na-eche ihe mpaghara mpaghara dị elu? Ọ bụ ọdụ nke aha ngalaba gị nke yiri ". com. "N'ozuzu ngalaba TLD na-arụ ọrụ maka weebụsaịtị weebụ. N'ime afọ iri gara aga, ihe agbanweela n'ụzọ dị egwu. Ụbọchị ndị a, ngalaba dị elu dịka "guru. "ma ọ bụ" pro. "dị. Ị nwere ike itinye ya na saịtị gị iji mee ka akara gị chefuo.
Afọ nke ngalaba bụ ọkwa dị oke elu nke na-egosi engines na-achọpụta otú ngalaba gị si dị mma.Ọ na-ezo aka na saịtị, usoro na mkpa ya na njiri-ajụjụ onye ọrụ. Iji bulie elu na Google, ngalaba gị kwesịrị ịdị ma ọ dịkarịa ala afọ abụọ.
O kwesiri iburu n'uche na onye nnochite anya Google John Mueller kwuru otu oge na ọgbọ na-enweghị mmetụta na saịtị ọkwa. N'ezie, ngalaba aha n'onwe ya apụghị imetụta ebe obibi gị. Otú ọ dị, ngalaba ochie, dị ka a na-achị, nwere ọtụtụ backlinks nke na-ezo aka na ha. Ọzọkwa, bọtịnụ Google amaliteworị ịbanye n'ime ya na n'ime ya. Ọ bụ ya mere ha ji ele ha anya dịka ndị a ma ama na ikike na Google.
Olee otú aha ngalaba nwere ike isi metụta SEO gị?
Ụlọ ọrụ niile kachasị mma na-enye ọrụ SEO malite na ọrụ nyochaa ọkachamara na njedebe na mgbasa ozi mgbasa ozi.Ọ bụ ezie na ụlọ ọrụ na-enye otu ọrụ ahụ site na akụkụ dị iche iche, ha nile dabeere n'otu echiche ndị a na-agbanwe agbanwe. Otu ụzọ siri ike na nke a bụ aha ngalaba gị. Ndị ọkachamara SEO na-arụ ọrụ n'okpuru ngalaba meziwanye ka ọ na-emecha nwee ike inyekwu ntụkwasị obi, elu-ọnụọgụ site na ọnụego, ikike dị elu karịa ma nwekwuo anya na peeji nke nsonaazụ ọchụchọ.
Ọ bụ ezie na ịchọrọ aha ngalaba gị, ọ dị gị mkpa ijide n'aka na ọ na-ezipụ akara ngosi iji nweta ihe kachasị uru. Ịkwesịrị ịmepụta mkpirisi na-adịghị echefu echefu na ịchọta aha ngalaba nke dabara na otu n'ime okwu ọchụchọ dị oke mkpa gị.
A na-edebanye aha aha nke ọma na njirimara na njirimara.